ARAG SAWIRO: Wararkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb iyo Ergada reer Cadaado oo maanta gaaray halkaasi. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta ARAG SAWIRO: Wararkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb iyo Ergada reer Cadaado oo maanta...
ARAG SAWIRO: Wararkii ugu dambeeyay Dhuusamareeb iyo Ergada reer Cadaado oo maanta gaaray halkaasi.
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ergada degmada Cadaado uga qayb galaysa shirka dib u heshiisiinta beelaha Gobolka Mudug ee dhawaan furmi doona ayaa gaaray xarunta dowlad goboleedka Gobolka Mudug ee magaalada Dhuusamareeb.
Wafdigaan oo ka kooban hoggaamiyayaasha bulshada iyo odayaal dhaqameed, waxaa halkaaasi si diirran ugu soo dhoweeyey xubno ka tirsan Guddiga Qabanqaabada Shirka dib u heshiisiinta, Waxgarad, ergadii Horay Dhusamareeb u gaartay iyo bulshada Caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb qaybaheeda kala duwan.
Xubnaha ergada Cadaado ee maanta gaaray magaalada Dhuusamareb ayaa la dejiyay halkii loogu talagalay waxayna ka mahadceliyeen sida diirran ee loo soo dhaweeyay iyo sida ay ugu soo diyaargaroobeen ka qaybgalka shirka dib-u-heshiisiinta beelaha Gobolka Mudug.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa laga dareemayaa qaban qaabadii u dambeysay ee shirka dib u heshiisiinta Galmudug, waxaana horay halkaasi u tegay inta badan ergada, iyada oo Xubnaha gudiga ay sheegeen in shirkaasi uu dhawaan furmi doono.
Ergada reer Cadaado ee maanta tagay magaalada Dhuusamareeb ayaa horay u diidanaa tagitaanka Magaaladaasi iyo ka qayb galka shirka dib u heshiisiinta Dhuusamareeb.
dhawaan furi doono
Ergada reer Cadaado